म भिजिट भिसामा गएर काम गर्न पाउँछु ?
Mon, Aug 10, 2020 | 10:26:00 NST
दिपक पाण्डे, गोरखा
प्रश्न : मैले युएईका लागि भिजिट भिसा पाउँदै छु । भिजिट भिसामा त्यहाँ गएर मैले काम गर्न पाउँछु ? के कस्ता प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्छ ? कति लागत लाग्छ ? मैले अरु जानकारीहरु कहाँ गएर पाउन सक्छु ?
उत्तर : बलबहादुर तामाङ, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगर व्यवसायी संघ - भिजिट भिसामा गएर काम गर्नु अवैधानिक मानिन्छ । यसो गर्नु भनेकाे तपाईंले देशलाई ठगी गरे जस्तै हो । तपाईं काम गर्नकै लागी जाने भए रोजगारी भिसामा जानुस् । त्यसको लागि तपाईंले श्रम स्वकृती लिनुपर्छ । यसले तपाईंको बिमा पनि कभर गर्छ । घाइते अथवा मर्दापर्दा तपाईं वा तपाईंको परिवारले बिमा दावि गर्न पाउनुहुन्छ । तपाईंलाई साह्रो गाह्रो पर्दा सरकारले मद्दत गर्न सक्छ ।